လမ်းညွှန်ကို run ဂျိုး LoGalbo ရဲ့ဟိုတစ်ဆန်းစစ်ခြင်း - ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း
Home » သတင္းေၾကျငာခ်က္ » ဂျိုး LoGalbo ရဲ့ဟိုအပြေးလမ်းညွှန်တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
သငျသညျအကွောငျးကိုမှားလမ်းသွားလျှင်, ပြေးအမြဲအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ဤသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်ပျက်ကဘာလဲ: သင်ချွေးစေးများမှာသည်အထိသင် 45 မိနစ်သို့မဟုတ်တစ်နာရီအဘို့ကို run ။ သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပြီးဆုံးနှင့်သင်ရုတ်တရက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှိသမျှတို့သည်သင်ပြုသောင့်ကြောင့်အပြေး၏အလွန်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခံစားရမကြာခင်မှာပဲ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်၏အစာစားသုံးခြင်းနှစ်ဆတက်အဆုံးသတ်နှင့်သင်ရုံအသုံးထက်ပိုကယ်လိုရီစားသုံးတက်လေ။
ဤလူမျိုးကိုစာရေးတံစေကြီးမားတဲ့အမှားဖြစ်ပါတယ်။ ဂျိုး LoGalbo အားလုံးလည်းကောင်းစွာဤပြဿနာကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ သူကစာအုပ် "ဟိုအပြေး" ရေးသားခဲ့သည်များနှင့်ဤစာအုပ်ကိုအခြေခံအားဖြင့်မုန်တိုင်းအားဖြင့်ကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးကမ္ဘာကြီးယူထားပြီးအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလမ်းညွှန်နှင့်အတူသင်လျော့နည်း running အားဖြင့်ပိုပြီးအဆီကိုမီးမရှို့နိုင်ပုံကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ carbs ၏အရပျ၌လောင်စာဆီအဘို့အဆီလည်းမီးလောင်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီသင်ဤအဆင့်မှမရတစ်ချိန်ကသင့်ခန္ဓာကိုယ်ချွတ်အရည်ပျော်ဖို့ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမရှေးခယျြမှုရှိပါတယ်။
ဂျိုး LoGalbo ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးဖြေရှင်းချက်ဟိုသိပ္ပံအပျေါမှာတညျဆောကျနေကြသည်။ အမြင့်ဆုံးသောပြင်းထန်မှုသို့မဟုတ်လူအများစုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မမှန်မကန်ပြုပါသောရိုးရာ cardio ကြားကာလလေ့ကျင့်ရေးကိုမေ့လျော့။ ဟိုအပြေး သငျသညျအဆုံးစွန်အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကို mode မှာသင့်ခန္ဓာကိုယ်ထားရန်တစ်ပါတ်မိနစ် 10 မှ 20 န်းကျင်ဖြုန်းဘို့ကိုသာတောင်းဆိုထားသည်။ ကျနော်တို့ကအရမ်းကြှနျုပျတို့သညျဤဟိုအပြေးစာအုပ်မှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ယူရန်ဆုံးဖြတ်သောရဲရင့်တောင်းဆိုမှုများအားဖြင့် floored ခဲ့ကြသည်။ ဒါကကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိဘာလဲ ...
1) LoGalbo ရဲ့ချဉ်းကပ်သင်သိသိသာသာရှိရာသို့အလျင်အမြန်သင့်ရဲ့လက်တစ်ခုံကိုရောက်ရှိစေမည်ဖြစ်သော testosterone ဟော်မုန်းသင့်ရဲ့အဆင့်အတန်းမြှင့်ကူညီပေးပါမည်။ ဤသည်ခေါင်းမာခန္ဓာကိုယ်အဆီအရှိန်မီးလောင်ရာဘို့လိုအပ်ပေသည်။ ဒီပြည်နယ်ရရှိမပါဘဲထွက်အလုပ်လုပ်သင်သည်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းပူးတွဲတင်ပြထားကြသည်မဟုတ်ဆိုလိုသည်။ ဟိုအပြေးသင်သည်သင်၏အလုပ်ကြိုးစားမှုများအတွက်အလွန်အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကိုပေးပါလိမ့်မယ်။
2) ဤနည်းလမ်းများသာရလဒ်များကိုလိုက်လျောဖို့အပတ်တိုင်းသင်တန်း၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုမိနစ်လိုအပ်သည်။ သင်တစ်ဦးမာရသွန်အပြေးသမားထက်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပိုမိုအချိန်ဖြုန်းတက်လေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အဆိုပါဟိုအပြေးစာအုပ်ထဲတွင်ပြသ 3) အဆိုပါနည်းလမ်းများလုပ်ကိုင်ဖို့သက်သေပြလျက်ရှိသည်။ ဤစာအုပ်သည်အုပ်ရေ၏ 1000s ရောင်းအင်တာနက်အပေါ်တစ်ဦးအရောင်းရဆုံးစာအုပ်အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကျေနပ်မှုဖောက်သည်ထံမှ reviews ဤစာအုပ်ကိုရလဒ်များကိုကယ်တင်ကြောင်းသက်သေဖြစ်ပါတယ်။ နည်းလမ်းများအစိုင်အခဲသိပ္ပံနှင့်မ untested သီအိုရီအပေါ်အခြေခံပြီးကြောင့်, သင်သည်ဤလမ်းညွှန်အလုပ်လုပ်တယ်သိမြင်ပါလိမ့်မယ်။
4) ကိုအဓိကစာအုပ်အတူပါလာသည်ဟုသုံးတန်ဖိုးရှိသောဆုကြေးငွေရှိပါတယ်။ ပြထားတဲ့နည်းလမ်းများလိင်စိတ်မြှင့်နှင့်၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာလိမ့်မယ်သောကြောင့်, များစွာသောလူတို့သညျဤအပိုဆုကြေးငွေအမှန်တကယ်အသုံးဝင်ရှာပါ။ ဆုကြေးငွေများပါဝင်သည်:
* အပိုဆု # 1: Shock များနှင့်ကွောကျရှံ့အစွမ်းသတ္တိ
* အပိုဆု # 2: အဆိုပါ testosterone Hacker လက်စွဲစာအုပ်
* အပိုဆု # 3: 17 အစားအစာများလိင်စိတ်ကိုတိုးပှားဖို့
* အပိုဆု # 4: မိုးလုံလေလုံဟိုပြေးခြင်း
5) ဂျိုးရဲ့ဖြေရှင်းချက်သင့်ရဲ့ဇီဝြဖစ်မြှင့်တင်ရန်နှင့်သင်တစ်ဦးတိုးမြှင့်မှုနှုန်းသည်နေ့ညဉ့်အချိန်တွင်ကယ်လိုရီကိုမီးရှို့စေမည်။ ဆိုလိုသည်မှာဤစာအုပ်ဒါထိရောက်သောစေသည်အရာဖြစ်တယ်။ သင့်ရဲ့အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကိုကိုရပ်တန့်မထားဘူး။
လေ့ကျင့်ရေးရွေးချယ်စရာအများစုနှင့်တကွ, အဆီနာရီအနည်းငယ်အတွင်းသက်ရောက်မှုပတေရုသထွက်ခြင်းနှင့်အဆုံးကိုမီးရှို့။ ဟိုပြေးနှင့်အတူ, သင့်ပိုလျှံအဆီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းကိုနိုင်အောင်မြင့်မားသောကြောင့်ပယ်အရည်ပျော်ဖို့ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမရှေးခယျြမှုရှိပါတယ်။
6) ဤစာအုပ်၌နည်းစနစ်သဘာဝကျကျသင့်ရဲ့ HGH အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ကူညီပေးပါမည်။ ဒါကကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကလူအများကြီးကသူတို့အလောင်းတွေအတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းဟော်မုန်းတိုးမြှင့်ဖို့အန္တရာယ်ရှိတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆေးထိုးကဲ့သို့အခြားနည်းလမ်းများ အသုံးပြု. ၏အမှားပါစေ။ ဤသည်အလွန်အန္တရာယ်ရှိသည်။ အဆိုပါဟိုအပြေးစာအုပ်နှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုဒီလောက်စွန့်ခြင်းမရှိဘဲသဘာဝ HGH ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနိုင်စွမ်းရှိပါလိမ့်မယ်။
7) ဤစာအုပ်အာမခံချက်တစ်ခု 60 ရက်ကြာပိုက်ဆံပြန်ရှိပါတယ်။ သငျသညျကျေနပ်နေကြသည်မဟုတ်ပါလျှင်ထိုကြောင့်သင်သည်အမြဲပြန်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံရနိုင်တယ်။
ကထောက်ပံ့တန်ဖိုးနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ၏ပမာဏကိုစဉ်းစား 8), ဟိုပြေးခြင်း၏စျေးနှုန်းမယုံနိုင်လောက်အောင်အနိမ့်သည်။ ဒီလမ်းညွှန်ကိုသင့်ငွေတန်ဖိုးကိုပေးစွမ်းသည်။
သငျသညျဒူးပြဿနာများရှိသည်နှင့်သင် run ဖို့မတတျနိုငျရောက်နေတယ်ဆိုရင် 1), ဟိုပြေးခြင်းသင်တို့အဘို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဟိုအပြေး 30 မှ 60 ၏အသက်အရွယ်အကြားယောက်ျားဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ သို့ဖြစ်. သင်၏အသက်အရွယ်နှင့်ကျား, မအဖြစ်ကောင်းစွာသင်ကန့်သတ်ထားပေမည်။
သူတို့ကိုသင်လျှောက်ထားလျှင် 2) ဂျိုးရဲ့ချဉ်းကပ်မှုသာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအကောင်အထည်ဖော်မှုအရေးပါကြောင်းပြောနေစရာမလိုဘဲတတ်, သင်တသမတ်တည်းနေလျှင်သင်သာရလဒ်များကိုမြင်လိမ့်မည်။
3) ကဟိုအပြေးစာအုပ်ပိုက်ကွန်အပေါ်သာရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်ကဝယ်ယူရန်နှင့်ဒေါင်းလုတ်လုပ်မယ့်အလုပ်လုပ်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်နဲ့ pc လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်ကဒါဟာ Buy သငျ့သလော
ငါတို့သည်သင်တို့သင့်စဉ်းစားပါ။ ဒါကကျနော်တို့ကိုဖြတ်ပြီးလာကြပြီအရှိဆုံးထူးခြားသောကြံ့ခိုင်ရေးလမ်းညွှန်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ဟိုထဲမှာဖော်ပြထားသောနည်းလမ်းများကိုကျိန်းသေအလုပ်လုပ်ဆောင်ခြင်း။ ဒါဟာအချိန်အများကြီးမလိုအပ်ပါဘူးကြောင့်အလွန်အမင်းစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ပါပဲ။ သင်သည်သင်၏အဆီဆုံးရှုံးမှုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်ရှာနေမယ်ဆိုရင်ဒီထုတ်ကုန်သင်တို့အဘို့အအံ့ဘွယ်သောအမှုအလုပ်မလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ယနေ့ကဝယ်ယူ နှင့်သင့်ပြေးအတွက်နည်းစနစ်အကောင်အထည်ဖော်ရန်။2အတွင်း3ရက်သတ္တပတ်မှ, သင်ကျိန်းသေခြားနားချက်ကိုသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာကောင်းပါတယ်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏လင့်များတဦးမှတဆင့်ထုတ်ကုန်ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် * ဤ website ကိုသေးငယ်တဲ့ကော်မရှင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ အသေးစိတ်ဘို့ငါတို့ privacy ကိုမူဝါဒအစာမကျြနှာကိုမွငျ ကျေးဇူးပြု.
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 18, 2018 admin သတင္းေၾကျငာခ်က္, reviews မှတ်ချက်မရှိ